မမသီရိ: June 2011
( ဘာတွေ လုပ်လို့ လုပ်မိမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ရှင်ရယ်...)
ဟိုမှာ တဖက်ကမ်း က ထွန်းညှိလိုက်တဲ့ ရောင်းစုံမီးပန်းတွေ...
ဘယ်အပွင့် ဟာ ဖြင့် ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ ..
ဘယ်အရောင် ကဖြင့် ဘာကို ဆိုလိုလေသလဲ..
ဘယ်နှစ်ခက် ဖြာ ရင်တော့ ဘယ်လောက် ကြာကြာ လွမ်းနေသလဲ..
ဘယ်သူ တယောက်မှ သတိမထားမိသော်ငြားလေလဲ..
ဒီတယောက် ကတော့ဖြင့် အဲဒီ တပွင့်က အဲဒါ ကိုပြောတာလို့ သိကိုသိနေခဲ့ပါတယ်..
ခရီးက ဝေးနေတော့ တဖွားဖွား အသံ ကလေး ဖြင့် မကြား ရပေဘူး...
ရှင် ပစ်လွှတ်လိုက်တဲံ့မီး ပန်းကလေးတွေ .. .
ကျမ ရဲ့ ည ကောင်းကင် မှာရောင်စုံ တောက်ပလို့ပေါ့ .. ရှင်ရယ်...
ည ပိုးကောင် တွေ စီစီ ညံ အောင် ၀ိုင်း အော်တော့
ရုတ်တရက် နင့် နင့် သည်းသည်း... ရှင့် ကို .. လွမ်း မိပါတယ်....
မှောင် ရီ စွန်း စ တညနေခင်း..
ကျမ .. ကျမ စာ စီရင်း လွမ်းထားတဲ့ ကဗျာ လေး ..
တလုံး စီကြွေ လို့.. ပုလဲ လုံးကလေး တွေ လို.. ရှင့် ဆီ လိမ့်လာ လိမ့် မယ်...
ဖမ်းယူ ကောက်သိမ်း ထား ပါ့ .. ကျမတို့ ဆုံ တဲ့ ထိ ပေါ့ .. ကွယ်...........။
Posted by မမသီရိ at 6/24/2011 08:21:00 PM
You're The "Wind Beneath My Wings"
All these are From our Hearts!!!
အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ၄ နှစ်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပေမဲ့.. သိခဲ့ကြတာက ၈ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ.. နှစ်လိုဖွယ်ရာ အပြုံးကို အမြဲ ပန်ဆင်ထားနိုင်ပြီး.. တွေ့သမျှ လူတိုင်းအတွက် မေတ္တာနဲ့ နားလည် ဆက်ဆံပေးနိုင်သူ.. မိမိ ကိုယ် ကို အမြဲ နှိမ့်ချ နေထိုင်ပြီး သူတပါး အတွက် ဘာပေးဆပ်ရမလဲ လို့ အမြဲ ကြံစည်နေတတ်သူ... အနေ အထိုင် အစား အသော် အားလုံး မှာ အမြဲ အနစ်နာခံတတ်သူ..။ အလုပမှာ အမြဲတိကျမှန်ကန်လွန်းလှ သော်လည်း၊ ဘ်လိုပ်ခြင်း မမျှတခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း ဘယ်တုန်းကမှ မရှိသော်လည်း ဒေါသ ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ ကျမတို့ မမြင် မတွေ့ခဲ့ဖူး သူ.ပါ.။ ကျမ နဲ့ တခြား ၀န်ထမ်း ၂၀၀ ကျော်ရဲ့ဘ၀ တွေအတွက်.. အင်အား ဖြစ်စေခဲ့ပြီး .. ဘ၀ မှာ အလင်းရောင် ထွန်းလင်းအောင် စွမ်းဆောင်ပေနိုင်ခဲ့သူပါ... သူ့ကိုကျမတို့အားလုံး ချစ်တာထက် သူကကျမတို့အာလုံးကို ပိုပေးဆပ် ချစ်ခဲ့နိုင် တာပါ..
တကယ်ဆို သူ့ အသက်အရွယ်က အငြိမ်းစားယူပြီး မိသားစုနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေသွား ရဖို့ ဖြစ်ပေမဲ့.. အမေရိကား မှာ မိသားစုနဲ့ သမီးလေး ၂ ယောက်ရနေပြီ ဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သား က ဘယ်လိုပင်ခေါ်နေသော်ငြား... အာရှ နိုင်ငံတခုမှာ တယောက်တည်း နေ. နေရ တဲ့.. ဇနီးသည်က ပြန်လာပြီး သက်တောင့်သက်သာ နေစေလိုသော်ငြား... သူတာဝန်ကျနေတဲ့ ဒီကျေးလက် က မိန်းကလေး ငယ်တွေ နဲ့ လူငယ်တွေ ရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် သူ့ ဘ၀ကို ဆယ်စုနှစ် တခုစာလုံး ဇနပုဒ်ကလေးမှာ အလုံး စုံ မြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့.. ကျမတို့ ဆရာ..
သူ့ ကို ကျမတို့ချစ်တာ.. စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ တယောက်ဖြစ်နေလို့ မဟုတ်ပဲ.. ဖခင်တယောက် ..သဖွယ်.. ခေါင်းဆောင်ကောင်း နဲ့ ဆရာကောင်းတယောက် လိုချစ်ကြတာမို့.. ကျမတို့ ကြားက သံယောဇဉ်တွေက..ခိုင်မြဲလွန်းလှပါတယ်.. မြန်မာပြည်ဖွား နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်နဲ့ တစ်နှစ်တည်း၊ တလတည်းမှာ ၂ ရက်ခြား ပြီး ဖွားခဲ့တဲ့ ဇွန် ၂၁ မှာ ကျရောက်တဲ့ ဆရာ့ မွေးနေ့ အတွက်.. ပါ...။
Posted by မမသီရိ at 6/20/2011 12:35:00 PM
Labels: မွေးနေ့လက်ဆောင်, နှစ်သက်မိသောသီချင်းများ
ဆတ် ကနဲ ခါအောင်.. လှုပ်နှိုးလိုက်တာ... ဘယ်သူလဲ...
ဒီလောက် ညီညာ ချောမွေ့ တည်ည် ငြိမ်ငြိမ် လမ်းကလေး..
အက်မွ ကြွေကျ.. အလဲလဲ.. အကွဲ ကွဲ ....
လေထဲ မိုးထဲ... ထီး မဆောင်းပဲ လျှောက်သွားခဲ့တာ..
ဘယ်သူ့ ကိုလွမ်းလို့လဲ.. မင်း မေးကြည့်ရဲပါရဲ့လား...
ကျမ ရဲ့ အညိုရောင်တောင်ကြား ကလေး.. ပြန်စိမ်းနေပြီ...
စိန်ပန်းနီနီတွေ .. ဖြန့်ကျဲ ချထားသော.. မြက်ခင်း စိမ်း..
မိုးရေစက်တွေ တခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်တန်ရာ...
သူ တို့ ကိုယ်တိုင် စိမ်း လို့ လဲ စိမ်း တာပေါ့....
မိုးကြို ရင်ငွေ့.. ဖွဲ လိုက် သဲ လိုက် အောက်မှာ...
ပြန်လည် ရှင်သန် ထမြောက် ခဲ့သော နှလုံးသား.....
လန်း ဆတ်နေလိုက် တာဆို.......
သူ့ ကို ချစ်ခြင်းတွေ ကြောင့်ပါပဲ... စိမ်းစိမ်းကို လဲ့ လို့............။
Posted by မမသီရိ at 6/07/2011 08:51:00 AM
ချစ်သူတို့ လျှောက်သောလမ်း ..
ပန်းလွှမ်း ရင် လဲ လွှမ်းမယ်...
နှစ်ယောက် အတူတူ တဘ၀..
ထူထောင်ကြစို့ လို့ ..
ရည် ရွယ် လက်တွဲ ပြီး ကြမှတော့....
မိုးရွာသော နေ့ မှာ မိုး နဲ့ ပျော်စေ..
နှင်းဝေသော မနက်တွေ နှင်းနဲ့ ပျော်စေ..
နွေထူသော နေ့ခင်းတွေ... ချွေးနဲ့ ပျော်စေ...
မှောင်လွန်းသော.. ညများ.. တွဲလက်နဲ့ ဖြတ်စေ..
ရှည်လွန်းသော ညများ... ရင်ငွေ့လှုံ ကျော်စေ..
ပြုခဲ့ဖူး သော.. သစ္စာ.... ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တိုင်ပါစေ.......။
မောင်ငယ် အရင်းအချာ တယောက်လိုချစ်ခင်ရတဲ့ မောင်ငယ်ကလေး .. အမှတ်တမဲ...............နှင်း ဘလော့ပိုင်ရှင်... ကဗျာဆရာကလေး ဘုန်းနေသွန်း နဲ့ ချစ်သူ မီ တို့ ရဲ့ မင်္ဂလာ ၂ လ ပြည့် အမှတ်တရ ပါ..
ကဗျာရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာနေပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် တင်မပေး နိုင်ခဲ့ဘူး...
မင်္ဂလာပွဲ ကို အရောက်မလာ နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ် မောင်လေး နဲ့ ညီမလေး ရေ..။
Posted by မမသီရိ at 6/02/2011 07:44:00 PM